I-YouTube: Uyibonelela njani ngeArhente yakho okanye uVideographer ngokuFikelela kuMsebenzisi kwisiteshi sakho | Martech Zone
NgoLwesithathu, Julayi 14, 2021 NgoLwesithathu, Julayi 14, 2021 Douglas Karr
Kwakhona, ndisebenza kunye neshishini elishiya iarhente kwaye ndisebenza nam ukuya Lungiselela ubukho babo kwiYouTube… Kwaye, kwakhona, iarhente ebebesebenza nayo inabanini bazo zonke iiakhawunti zabo. Kudala ndikhalaza malunga neearhente ezenza oku ngaphezulu kweshumi ngoku ndicebisa amashishini ukuba angaze ayenze le nto. Kananjalo ukuba ishishini akufuneki linike ukungena ngemvume kunye negama eligqithisiweyo lokulawula nayiphi na iakhawunti.
Iindlela ezifanelekileyo zokwenza nawuphina umsebenzi wearhente kukusebenzisa amanqaku eshishini kuwo onke amaqonga aphambili, ukusuka kubabhalisi besizinda, iinginginya zewebhu, kumajelo entlalontle ukubonelela ukufikelela kumphathi kodwa ungaze uhlawule kwaye ungene kubunini. Ukuba akwenzi njalo, kuhlala kukho ithuba lokuba iarhente kunye nokuwa kwaye kunzima ukubuyela kubunini okanye ukufikelela kwiarhente yakho elandelayo. Okona kubi, iarhente okanye umcebisi osebenza naye unokuphuma kwishishini okanye angafumaneki xa uyidinga. Musa ukubeka emngciphekweni ishishini lakho ngolu hlobo!
Namhlanje, ndiza kukuhamba ngendlela yokubonelela ngokufikelela kwiarhente yakho okanye kwi-vidiyo yevidiyo kwiChannel yakho yeYouTube ngokongeza njengomphathi wegama lakho kuGoogle.
Ungamdibanisa njani umphathi kwiYouTube
UGoogle uye wenza kancinci kancinci ujongano kunye nokukhetha kuzo zonke iinkonzo zabo apho unokuba neakhawunti yebhrendi kwaye ukongeza abasebenzisi phantsi kwale akhawunti ababanikeza ukufikelela okulinganiselweyo. Uncedo loku lulula:
Awuboneleli ukungena okubalulekileyo kunye neephasiwedi nokuthembela kwiarhente yakho ukubagcina bekhuselekile.
Awunakuze ukubonelela ngobunini kwiarhente yakho, ke akukho ngxaki ukuba uthatha isigqibo sokushiya. Ungena ngokulula kwaye ususe ukufikelela kwabo njengomphathi.
Iarhente yakho inayo ukufikelela ngokulinganiselweyo ukulawula iakhawunti, ngaphandle kokufikelela kwiimpawu ezingafanelekanga ukuba zifane nokuhlawula, ukuphathwa komsebenzisi, okanye ubunini.
Amanyathelo okongeza iArhente okanye uVideographer yokuLawula iChannel yakho yeYouTube
vula Isikhululo seYouTube kwaye ucofe useto emazantsi emenyu yasekhohlo.
Khetha iimvume kwifayile yakho ye- izicwangciso Imenyu kwaye ucofe Phatha Iimvume. Kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yakho apha ukuze uGoogle aqinisekise ukuba ungumnini.
Ngoku ukule Iinkcukacha zeakhawunti yebhrend kwaye unokukhetha lawula iimvume kubasebenzisi bakho.
Ngaphezulu ekunene, cofa i icon ukuya Mema Abasebenzisi Abatsha.
Yongeza Abasebenzisi abatsha ngoku iya kwenza ukuba ungeze idilesi ye-imeyile kunye nendima yabo kwiakhawunti yakho. Ingcebiso yam ye-arhente okanye i-videographer iya kuba yongeza njenge umlawuli.
tags: yongeza umphathi kwi-youtubeakhawunti yebrandIakhawunti yohlobo lweGooglekwenziwa kanjanilawula iimvume kwi-youtubeyoutubeIakhawunti yohlobo lweYouTubeIsiteshi se-YouTubeUmphathi wesiteshi seYouTubeUkuthengisa kwi-youtubeIimvume ze-YouTubeUmsebenzisi we-YouTubeIimvume zomsebenzisi we-YouTube